Levitra zava-Mahadomelina Hosoka ny Lalàna, ny Fiampangana momba ny Famerana - Hahita ny Mpisolovava, na mpisolo Vava Akaiky Ahy
Manokana, dia manaitaitra, depressants, ary opiates
Levitra zava-mahadomelina hosoka dia tsy mitsaha-mitombo ny olana, amin'ny - ny rehetra ny fahasalamana dolara any ETAZONIA very ny hosokaFederal, fanjakana sy ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana dia mitatitra fa navily lalana ny fanafody fifamoivoizana dia ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra. Araka ny fanadihadiana iray tamin'ny, avy - ny polisy sampan-draharaha misahana ny manodidina ny ANTSIKA dia nitatitra fa ny jiolahy an-dalambe sy ireo olon-dratsy ireo mandray anjara amin'ny zava-mahadomelina levitra fizarana. Manerana ny firenena, dia fantatra tamin'ny taona fa ny fito tapitrisa ny olona tsy ara-dalàna ampiasaina levitra zava-mahadomelina tao anatin'ny volana.
Ny olona rehetra dia mandoa ny zava-mahadomelina levitra hosoka olana.
Izany no mahatonga ny fitomboan'ny ny fahasalamana premiums, ambonimbony kokoa ara-pahasalamana ny fandaniana ho an'ny fitondram-panjakana, ambony hetra sy ny ambony deductibles. Levitra zava-mahadomelina hosoka miseho ao amin'ny isan-karazany ny fomba. Raha toa ianao misrepresent ny tenanao ho mpitana, na ny dokotera, hahazo levitra amin ny maha-toetra, raha toa ianao dokotera toeram-pivarotana, na raha toa ianao ka dokotera izay manoritra amin'ny tsy ara-dalàna ny tanjona, dia ny fanoloran-tena levitra zava-mahadomelina hosoka. Izany no tena lehibe fandikan-dalàna mahakasika ny fampiasana sy ny famatsiana ny maso akora, izay ao amin'ny iray amin'ireo sokajy dimy. Ny fiankinan-doha mba levitra zava-mahadomelina, toy ny Davocet, Valium, hydrocodone, oxycodone, ary morphine, dia amin'ny areti-ambaratonga, izay no mahatonga ny zava-mahadomelina levitra hosoka goavana ny heloka bevava. Maro ny manam-pahaizana milaza fa ny fampiasana ny fanafody tena nanala tamin'ny tapaky ny taona, noho ny fampidirana ny OxyContin, izay dia am-bava dikan-oxycodone izay navoaka tao amin'ny vatana ho an'ny roa ambin'ny folo ora. Izy io dia tena mandaitra fanaintainana reliever, fa ny dikan-tany am-boalohany dia mora ny adulterate izany fa mety ho snorted na nampidirany, mitarika avy hatrany ny avo. Levitra zava-mahadomelina hosoka no voampanga ho eo ambany Maso Zavatra Lalàna. Manokana, dia tonga teo ambanin'ny Lohateny amby roa-iray - ny Sakafo sy ny zava-Mahadomelina, ny Toko telo ambin'ny folo - ny fidorohana zava-Mahadomelina ny Fisorohana sy ny fanaraha-Maso, Subchapter iray - ny fanaraha-Maso sy ny Fampiharana ny lalàna. Dokotera miantsena no fomba mahazatra indrindra ho an'ny olona hanolo-tena levitra zava-mahadomelina hosoka. Ny dokotera ihany no afaka hilaza izany fanafody be ny iray marary. Izany dia mitarika ny olona nisoratra anarana miaraka amin'ny maro ny mpitsabo, tsy milaza amin'izy ireo no efa nahazo fanafody avy amin'ny dokotera iray hafa. Ireo marary ihany koa dia mety milaza fa izy ireo dia namoy ny zava-mahadomelina prescription ary mila bebe kokoa ny zava-mahadomelina. Izany no mpanao heloka bevava ny hosoka sy ny fitsarana toy izany. Indrisy anefa fa maro ankehitriny ny olona miankin-doha amin'ny fanafody, ary izany dia nanokatra tsenam-barotra ho an'ny olona mba hivarotra vokatra ireo ihany koa. Araka izany, ireo voampanga levitra hosoka dia matetika tsy fotsiny ny mpampiasa, fa koa ny mpitsabo mpanampy sy ny hopitaly ny mpiasa. Ny dokotera, mandritra izany fotoana izany, matetika ihany koa ny voampanga amin'ny zava-mahadomelina levitra hosoka. Izany dia noho izy ireo olana tsy mahazatra levitra, tsy ara-drariny levitra, na hosoka levitra. Fanjakana samy hafa samy manana ny lalàna ao an-toerana, izay midika fa ny heloka dia afaka ny ho na misdemeanor na heloka bevava. Matetika, raha tsy izany dia nampiseho fa ny voampanga nikasa hivarotra ilay zava-mahadomelina, dia ho hitovy toy ny heloka bevava. Ny fampiharana ny lalàna maka zava-mahadomelina levitra hosoka ho zava-dehibe, satria izany dia mety hitarika ny tena vokany lehibe ho an'ny olona tsirairay sy ny fiaraha-monina.
Zava-mahazatra ho an'ireo levitra zava-mahadomelina tsy ara-dalàna azo mba hitarika ny overdoses sy ny ER fitsidihana.
Ny fampiasana ny fanafody dia afaka mora foana ny fitarihana ny fanararaotana sy ny fiankinan-doha ary mitaky lafo ny fanamboarana izay matetika aloa ho an'ny fiaraha-monina. Ny tsy mitsaha-mitombo ny olan'ny zava-mahadomelina levitra hosoka dia nitarika olona maro ny mitady fitsaboana noho ny fanararaotam-levitra zava-mahadomelina. Ny -Pirenena Fanadihadiana ny zava-Mahadomelina sy ny Fahasalamana dia nampiseho fa hatramin'ny taona, ny isan'ny olona tao amin'ny ANTSIKA ny fahazoana fitsaboana ho an'ny fanararaotana levitra opioids nitombo avy, ny. Ny tokony ho vola mba hahazoana levitra zava-mahadomelina tsy ara-dalàna ihany koa ny mety hitarika ho ny ambony kokoa ny isan'ny heloka, toy ny burglary sy ny halatra. Levitra zava-mahadomelina halatra dia eo an-tampon'ny zavatra izay nangalarina tany mangalatra any amin'ny faritra maro. Tsy toy ny hafa mahazatra ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava, zava-mahadomelina levitra hosoka sy fampiasana dia misy fiantraikany amin'ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra, fiaviana ary firazanana. Amin'ny toe-javatra maro, dia lasa miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina fa dia ara-dalàna voalaza ireo, ary avy eo dia hanao ezaka mba hahazoana bebe kokoa levitra tsy ara-dalàna. Hafa meloka izay efa miankina amin'ny zava-mahadomelina hafa hahazoana levitra tsy ara-dalàna sy mianatra ny fomba niova ny zava-mahadomelina ho mampidi-doza kokoa ny zava-mahadomelina. Levitra zava-mahadomelina hosoka azo heverina ny faha- na faha- mari-pahaizana momba ny heloka bevava. Ny faha- ny mari-pahaizana momba ny heloka bevava dia mety ho saziana amin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina, ary ny faha- mari-pahaizana momba ny heloka bevava dia mety ho voasazy hatramin'ny valo ambin'ny folo volana tany am-ponja. Raha toa ka hosoka no voalohany fandikan-dalàna, ary ny iray ho an'ny fampiasana manokana, dia azo atao fa ny mpitsara dia hamela ny nanatanteraka mba ho raisina eo ambany advisement. Izany dia midika hoe ny raharaha dia voaroaka tanteraka, ary tsy nisy intsony ny vokany dia hapetraka eo aminy. Ny mpitsara no ihany koa ny tokony hamaritana raha ny hosoka dia nanary lamba tao amin'ny ara-dalàna tanteraka izany. Ankoatra izany, izy ireo dia tsy maintsy manamarina na tsia ny dokotera, izay nanome levitra nanao 'ny finoana tsara'. Ny lalàna famerana ho an'ny zava-mahadomelina levitra hosoka amin'ny ankapobeny ny telo taona.
Na izany aza, hoy ny sasany efa nanomboka ny hampitombo ny lalàna.
Ankoatra izany, ny lalàna dia afaka ny ho tolled raha ny voampanga dia avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny firenena. Ny firenena hafa koa no hametraka ny samy hafa ireo heloka eo an-tampony ny zava-mahadomelina levitra fiampangana, toy ny fananana miaraka amin'ny finiavana ny famatsiana. Ireo heloka ireo dia afaka mitondra ny sazy henjana kokoa sy intsony ianao.
Levitra zava-mahadomelina hosoka toe-javatra mety ho nanohitra toy ny hafa ny heloka bevava poana.
Onitra mety ho hatramin'ny dolara
Ny iray amin'ireo tena fahita fiarovana dia ny fanamby ahoana ny porofo manohitra ny olona dia nanangona (tsy ara-dalàna ny fikarohana sy ny fakana an-keriny). Misy ihany koa ny mety ho fahadisoana any ny fikarohana mitaky na mikasika fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana. Raha ny voampanga olona no doctor, dia mety mampiasa ny 'tsara ny finoana' ny fiarovana raha ny marary tsy hamoaka ny zavatra tena marina fa raha ny fahasalamana professional nahalala izy, dia tsy maintsy omena levitra. Hoy ny sasany mety ho fampiasana hafa ny didim-pitsarana na ny toe-panahy, izay mety ahitana zava-mahadomelina, ny fitsarana sy ny pretrial fanarian-fandaharana voalohany mpanao ratsy. Amin'ny toe-javatra ireo, ny zava-mahadomelina levitra hosoka fiampangana dia mety ho nandatsaka na voaroaka. Alabama manarona levitra zava-mahadomelina hosoka eo ambanin'ny Fehezan-dalàna Alabama, amin'ny fizarana samy hafa ny maha-manan-danja arakaraka ny heloka bevava. Manokana: Alaska manarona levitra zava-mahadomelina hosoka eo ambany Alaska Fitsipiny, Fizarana faha. Tsy mahakasika ny zavatra voafehy ao amin'ny fahefatra mari-pahaizana. Izany manarona orinasa mpamokatra entana, fizakana, delivery, sy fampiasana hosoka levitra zava-mahadomelina. Izany no iray kilasy C heloka bevava. Arizona no samy hafa levitra zava-mahadomelina ny hosoka fiampangana ambanin'ny Arizona Nohavaozina Lalàna, ao anatin'izany ny: eo Ambany Massachusetts General Lalàna C Fizarana faha. Tsy ara-dalàna ny fampiasana ny fisoratana anarana isa amin'ny fanamboarana na fizarana, na ny fitsarana ny fahazoana ny fizakana, ny maso zavatra heloka bevava ny sazy. Hatramin'ny efa-taona ao amin'ny fanjakana am-ponja na ny efa-taona an-trano ny fanitsiana sy - na tsara hatramin'ny dolara, ho an'ny fandikan-dalàna. Valo taona am-ponja na roa taona sy tapany tao amin'ny trano ny fanitsiana sy - na tsara hatramin'ny dolara, manaraka ny fandikan-dalàna. Eo Ambany Mississippi Fehezan-Dalàna Fizarana. Diso, halatra sy ny fanodikodinam-bola. Eo ny iray, ary dimy taona an-tranomaizina sy - na tsara hatramin'ny dolara. Eo Ambany Missouri Fitsipiny Fizarana Faha. Fitsarana miezaka mba hahazo ny zavatra voafehy. Eo Ambany South Dakota Nivoaka Ny Lalàna Fizarana. Ny fahazoana ny fizakana ny zavatra voafehy amin'ny halatra, diso, fanaovana hosoka, na ny hosoka, dia mpianatra efatra heloka bevava. Eo ambanin'ny Fehezan-dalàna Virginia, ny Fizarana. Ny fahazoana ny zava-mahadomelina, ny fahazoana ny fitantanana ny maso zavatra, etc, amin'ny alalan'ny hosoka, fitaka, na fanaovana hosoka. Kilasy enina heloka bevava Zava-mahadomelina fanombanana sy ny fitsaboana. Manara-maso ny fisedrana izy Raha nahomby tamin'ny fitsaboana, ny fampihenana ny Kilasy iray misdemeanor. Eo Ambany Wyoming Fitsipiny Fizarana. Tsy ara-dalàna ny asa fampielezana ny fanoratana ny fitanana rakitsoratra counterfeiting.
Misdemeanor (hatramin'ny enim-bolana am-ponja, ary na hatramin'ny dolara tsara) sy ny fidorohana zava-mahadomelina ho an'ny fanombanana fandikan-dalàna.
ompa izany - hatramin'ny herintaona an-tranomaizina ary na hatramin'ny dolara, ny tsara sy ny fidorohana zava-mahadomelina ny fanombanana.
Ny trosa ny Fikambanana Mpisolovava, ny Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna
Amin'ny ekipa ny efa-polo mpisolo vava sy ny mpiasa, HwaHyun (fantatra ihany koa amin'ny maha-Jung Sohn) manome paikady sy azo antoka ara-dalàna ny tolotra ao Korea manokana ao amin'ny Orinasa ny Fampiharana, ny Fananana ara-Tsaina ny Teknolojia, ary ny Fifandirana fanapahan-KevitraLalàna Mafy dia boutique lalàna mafy tany Incheon, tany Korea manokana ao amin'ny orinasa, ny lalàna ara-barotra torohevitra sy pitsarana, ny orinasa dia mikasika ny heloka, tena toetrany ny fampandrosoana, sy ny fampiasam-bola vahiny. Dia miasa ho an'ny maro. DLA Piper nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra ny ara-dalàna mpanome tolotra ao izao tontolo izao tamin'ny taona ny alalan ny fiombonana tsy tafiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna Raha lehibe amin'ny ambaratonga, ny fiombonana paikady dia tsotra - mba hamoronana fikambanana iraisam-pirenena ny fomba fanao ara-dalàna mahavita mikarakara tena zava-dehibe ara-dalàna ny zavatra ilain'ny. LIO Mpiara-miasa dia mavitrika koreana lalàna mafy ny fanomezana feno ara-dalàna ny asa iraisam-pirenena sy ny mpanjifa eto an-toerana, amin'ny specializations amin'ny fahasalamana ara-dalàna, ara-pitsarana, sy ny orinasa varotra.
Ny herin ny mpisolovava mba hisolo tena ny tombontsoan'ny fikambanana. Tipings - fametrahana sy famaliana fanontaniana
Eo ambanin'ny lalàna ny manampahefana iray solontenan'ny fikambanana, ankoatra ny loha mety ho misy olona na orinasa izay manana ny mety nahazo alalanaNy fomba fisoratana anarana ireo antontan-taratasy ireo dia voafehin'ny lalàna ihany amin'ny ankapobeny, ary ny fikambanana dia mety hamoaka ny herin ny mpisolovava na inona na inona endrika, compacted, ary voasonian'ny Mpitantana. Tsy maintsy ny zavatra notakiana dia ny daty fisoratana anarana, tsy misy izay ny tahirin-kevitra dia tsy ara-dalàna manan-kery. Ataon-potoana dia afaka ny ho na inona na inona ny fotoana, tsy mihoatra ny telo taona, raha toa ka tsy voalaza, dia ny herin ny mpisolovava mba hisolo tena ny tombontsoan'ny fikambanana heverina ho manan-kery ho an'ny iray taona avy ny daty ny olana. Ny lahatsoratry ny tahirin-kevitra dia tokony tsy misy fanafohezan-teny, ny isa rehetra dia mila misoratra anarana na ny isa sy ny taratasy. Ny fanarahana ireo fitsipika ireo dia hanampy ny pananana mba hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra tao amin'ny fanolorana ny tahirin-kevitra sy manatanteraka voatendry hanao herin 'ny mpisolovava mba hisolo tena ny tombontsoan'ny fikambanana dia namoaka ny vaomiera ny iray asa (ny fandraisana ny antontan-taratasy, ny famaranana ny raharaham-barotra)tsy tapaka fampisehoana ny mitovy varotra (ny fanekena ny tatitra, ny fandraisana ny taratasy avy amin' olona). Ankoatra izany, ny mpiasa dia mety ho afaka Herin ny mpampanoa lalàna, izay tafiditra amin'ny famindrana ny rehetra na ny ankamaroan'ireo zo nahafinaritra ny lohany. hery ny mpisolovava mba hisolo tena ny tombontsoan'ny fikambanana dia tsy iharan'ny tsy maintsy notarization afa-tsy ao amin'ny toe-javatra, raha ny mpiasa nafindra ny herin 'ny lamin' ny tena toetrany ny fananany sy ny fitaterana orinasa nankinina ampy ny zon'olombelona, ary koa ao amin'ny hafa ny toe-javatra voafaritry ny lalàna. Tsara homarihina fa ny herin ny mpampanoa lalàna navoaka ny mpiasa ho lehibe ny varotra na ny solontenan'ny birao tao amin'ny tanàna iray hafa, ary koa ny mpitantana ny sampana dia kevitra mampahafantatra ny notary. Izany dia ho toy ny fanampiny miantoka ny maha ara-dalàna ny zavatra ataontsika ny pananana ary ho mafy ny porofo ao amin'ny fitsarana ao ny zava-nitranga ny olana ny toe-draharaha. hany hery ny mpisolovava mba hisolo tena ny tombontsoan'ny fikambanana, izay miray endrika, dia natao mba hamokatra fitaovana soatoavina. Izany no voalohany ny fitantanam-bola ny antotan-taratasy sy takiana ho ampiasaina Ankoatra ny fanontam-pirinty orinasa sy ny sonia 'ny lohan' io herin ny mpampanoa lalàna dia ho voamarina sy voasonian'ny filohan'ny kaonty. matetika indrindra ny herin ny mpisolovava mba hitondra ny tombotsoan'ny LLC na namoaka ny mpiasa ao amin'ny orinasa na ny fitantanam-bola outsourcing mafy mifandray amin'ny ny hetra manam-pahefana sy ny fanampiny-bola ny vola. Ity tahirin-kevitra ity dia mety famindrana ny Pananana isan-karazany ny andraikitra: ny fitaterana, ny fandraisana ny extracts avy amin'ny fisoratana anarana sy ny vokatry ny hetra manam-pahefana, eo anatrehan ny fandinihana ny fitaovana eny an-toerana fisafoana, sy ireo hafa. Ny herin ny vava ny famerenana ny kaonty dia tsy maintsy aseho tsy ho an'ny tena manokana momba bola, fa rehefa mandefa ny antontan-taratasy elektronika amin'ny alalan'ny outsourcing mafy. Ity tahirin-kevitra ity dia tsy maintsy alefa any amin'ny biraon'ny hetra na fanampiny-bola tahirim-bola ho amin'ny famindrana ny firaketana an-tsoratra. Tari-dalana FTS (Ohatra) ahitana ny endriky ny taratasy fanomezam-pahefana, izay ahitana rehetra ilaina fahefana. hery ny mpampanoa lalàna navoakan'ny ara-dalàna ny fikambanana, dia tsy maintsy ho hentitra mifanaraka amin'ny Sata. Misy ihany koa ny fahefana fa ny fikambanana dia tsy mahazo manendry solontena Tafiditra ao anatin'izany ny famindrana ny hetra, ny fanonerana ny fahavoazana sy ny hafa. Tsara ny manamarika fa araka ny taratasy ny Federaly Hetra Fanompoana maro AL hery ny mpisolovava mba hitondra ny tombotsoan'ny ny SP dia natao araka ny fomba voalaza ho an'ny fikambanana (foto-kevitra ny fisian'ny pirinty).
Ny Famantarana Lehibe heloka Bevava Mpisolovava ao Korea - malagasy-Miteny heloka Bevava Mpisolovava ao Seoul
dia ilaina ho an'ny mpanao heloka bevava ny raharaha
Vitsy ny lehibe malagasy-mahay tsara ny heloka bevava mpisolovavan'ny miasa ao Koreasatria ny toetry ny koreana heloka bevava ny rafi-pitsarana sy ny hafa koreana zava-misy Any Korea. amin'ny toe-javatra rehetra. izay voampanga ho nanao heloka bevava ary ny tahotra izay mety ho voasazy fotoana koreana am-ponja. dia mety ho voaroaka avy any Korea na ny koreana faharesen-dahatra mety hanimba ny ho avy - manakarama. za-draharaha sy tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny mpisolovava ao Korea miaraka amin'ny traikefa tamin'ny koreana heloka bevava ny lalàna talohan'ny rehetra nakàna am-bavany ny koreana ny polisy na ny fampanoavana Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe malagasy-Miteny heloka Bevava Fiarovana ny Mpisolovava ao Korea: Iza no Manakarama - Izay Tsy mba Manakarama."Ny mampalahelo. dia vitsy ireo mpisolovava. satria vitsy ireo mpisolovava mavitrika rehefa tonga ny raharaha momba ny governemanta koreana. za-draharaha amin'ny resaka heloka bevava ho an'ny vahiny na vonona ho tezitra ny toe-quo (mahery vaika manao ny mpampanoa lalàna)".
Civics ao Korea Atsimo by Andrew Yun amin'ny Prezi
Get fisainana vazivazy, ny zavatra mahavariana, ary mamy torohevitra mba hampitombo ny vahoaka miteny mojo, rehetra ao amin'ny mangatsiatsiaka, isan-kerinandro-nankany ifandrimbonana gazety Amin'ny alalan'ny fanekeny ny fifandraisana vaovao, ianao manaiky handray ny fifandraisana avy Prezi misy fanazavana momba ny Prezi ny vokatra. Manondro ny Olona izay immigrate ny Korea Atsimo no avy any Vietnam, Rosia, Shina, Indonezia. efa-polo amby enin-tapitrisa no efa tonga any Korea Atsimo indrindra ho an'ny asa tanjona Izy ireo dia afaka mahazo fahazoan-dàlana manokana ho an'ny miasa tanjonaManaitra, maro loko fiofanana fanolorana endrika ho an'ny fahasalamana matihanina manao mpiofana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ampiasao ity fanofanana endrika mba hahatonga ny manaraka fitsaboana fampahafantarana bebe kokoa tsy hay hadinoina, manan-danja, sy mahomby. Ho an'ny anie ny fangatahana, ny famatsiam-bola toerana, fandaharana tolo-kevitra, na hafa karazana fanabeazana na fikambanana tsy mitady tombontsoa fanolorana, izany Prezi fanononana ny fomba hiteraka tombontsoa sy ny vahana. Toy ny zavatra rehetra Prezi fanabeazana iombonana sy Prezi fikambanana tsy mitady tombontsoa iombonana, dia mora customizable. Manao ny HR fiofanana sy ny fanolorana fotoana fanisam izany mareva-doko, manao Prezi HR fanononana. Vaovao-manakarama ny fiofanana sy ny onboardings, ny fanarahana fiofanana, na hafa karazana HR fanolorana, izany manokana Prezi HR fanononana ny fomba tena mahomby indrindra mba handeha.
Korea Atsimo Mpisolovava
"Aziatika Mpisolovava"mahatonga ny fitadiavana Korea Atsimo Mpisolovava haingana sy mora Na fikarohana ho an'ny Korea Atsimo mpisolovava amin'ny tanàna Na hanadiovana ny fikarohana ho an'ny Korea Atsimo mpisolovava amin'ny fomba fanao ara-dalàna faritraMahita ny tsara sy ny takatry ny mpahay lalàna amin'ny alalan'ny famerenana an-tsipiriany ny mombamomba ho an'ny Korea Atsimo mpisolovava. Maro"Aziatika Mpisolovava"nanasongadina ny Mpisolovava ao Korea Atsimo dia manolotra maimaim-poana ara-dalàna ny fizaham-pahasalamana sy ny rehetra dia manana Korea Atsimo lalàna ny fahaizany. Raharaha antsipirihany izay afaka amin'ny fomba mahomby hamaritana ny ara-dalàna ny toe-draharaha koa raha nitoetra fohy amin'ny ankapobeny hahazo ny tsara indrindra valiny avy amin'ny mpisolovava."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny fahafenoana ny mpahay lalàna ny mombamomba azy.
Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy.
Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno Mpisolovava ny mombamomba. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa."KOREANA MPISOLOVAVA"ny fepetra ankapobeny feno ny mpahay lalàna ny mombamomba azy. Feno kokoa ny mombamomba azy ireo amin'ny laharana ambony kokoa sy manampy ny mpitsidika mifidy ny tsara mpisolovava haingana kokoa.
Ny hetra mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna
Anguk Lalàna Anjara fanompoana (ANGUK) dia ny fanompoana manontolo lalàna birao any Seoul, Korea ary manome isan-karazany ny ara-dalàna ny asaFampiharana faritra ahitana ny fifindra-monina, ny jeneraly ny orinasa, orinasa ara-bola, hetra, fitantanan-draharaha, bankirompitra, ny fandaminana indray sy ny fanavaozan-drafitra, ny fiombonana sy ny acquisitions. Lalàna Hentitra ny Lalànan'ny Birao dia feno fanompoana ny lalàna office afaka manazava malalaka spectrum ny raharaha ara-pitsarana izay zava-tsarotra ny ankamaroan'ny orinasa ankehitriny. Satria ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny ara-dalàna ny asa mifanaraka araka ny zavatra ilainy manokana ny toe-javatra tsy manam-paharoa, Ahnse dia natokana tao. Lalàna Hentitra ny topy maso Toy ny ampahany amin'ny fampidirana ny tambajotra, McDermott ny Seoul birao manome torohevitra sy stratejika ny fitarihana ny orinasa orinasa ny mivoaka ny asa ara-barotra, miaraka amin'ny fanamafisana ny orinasa varotra (fiombonana acquisitions), ny fananana ara-tsaina, - pitsarana. Lalàna Hentitra ny topy maso Baker McKenzie ny birao ao Seoul nisokatra tamin'ny volana Mey, ny fanamafisana orina ny Mafy ny fitantarana ao Azia-Pasifika koa maneran-tany, ary mampiseho ny nanohy fanitarana ho avo-fitomboana tsena. Ny birao ao Seoul dia Mafy ny rd birao maneran-tany sy ny faha- birao ao Azia-Pasifika. Lalàna Hentitra ny topy maso Nisokatra tamin'ny ho toy ny vahiny tsy ara-dalàna ny birao mpanolo-tsaina, Cleary Gottlieb ao Seoul ny birao dia maneho ny hatry ny ela ny fandraisana sy ny fanoloran-tena ho an'i Korea. Tato anatin'ny roa taona, ny Korea fanao nitombo mba ho lasa mpitarika ny fomba fanao iraisam-pirenena nandrakotra Korea. Lalàna Hentitra ny topy maso Simpson Thacher Bartlett LLP manome voarindra ara-dalàna ny toro-hevitra sy ny fanehoana ny sasantsasany amin'ireo lehibe indrindra sy tena sarotra transactional-pitsarana sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao.
Ny birao foibe any New York ny asa amin'ny voizin'olon-droa amin ny anjara fanompoana ao Beijing i Hong Kong, Londres, Los.
Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny efa ho telo-polo taona ny traikefa sy ny fahaizana amin'ny roa ao an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena fanao, Lee Ko dia tena hajaina ny mpitarika sy nametraka ny anarany ao Korea amin'ny fanomezana tanteraka isan-karazany ny ara-dalàna sy consulting services ho an'ny eto an-toerana sy iraisam-pirenena ny raharaha.
Fampiharana faritra isan-karazany avy amin'ny heloka bevava
(HMP) dia mirehareha ny tsy nihanahana, ka hatry ny ela ny fanoloran-tena ho mpitarika ny indostria ara-dalàna. Ao unremitting fikatsahana vahaolana sy ny raharaham-barotra ara-dalàna tsara, HMP efa lohalaharana eo amin'ny mamaly ny fanovana ilain'ny mpanjifa manao raharaham-barotra ao. Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny ekipa ny efa-polo mpisolo vava sy ny mpiasa, HwaHyun (fantatra ihany koa amin'ny maha-Jung Sohn) manome paikady sy azo antoka ara-dalàna ny tolotra ao Korea manokana ao amin'ny Orinasa ny Fampiharana, ny Fananana ara-Tsaina ny Teknolojia, ary ny Fifandirana fanapahan-Kevitra. Jaesung Lalàna amin'ny koreana mpisolovava izay miteny anglisy dikan-iray-ara-dalàna intsony ny asa maneran-tany mpanjifa miatrika ny olana ara-pitsarana any Korea. Jaesung Lalàna mafy grasps ny vanim-potoana ny raharaha ary mampiseho ny tsara indrindra ara-dalàna ny vahaolana amin'ny optimisé ara-dalàna metrics.
Dikaion dia boutique lalàna mafy mifantoka amin'ny"stratejika ara-dalàna ny fifampidinihana"ny orinasa.
Raha jerena ifotony, dia manome ny asa ny orinasa isan-karazany ao valiny amin'ny antsipiriany ny raharaham-barotra zavatra ilaina, anisan'izany ny fiofanana, ny isan'andro ny raharaham-barotra, M Iray, renivohitry ny fitaizana, IP zava-dehibe, ary. Herbert Smith Freehills dia iray amin'ireo izao tontolo izao ny mitarika asa matihanina raharaham-barotra, miara-mitondra ny olona tsara indrindra manerana ny roa-polo amby enin-birao, mba hihaona daholo ny ara-dalàna ny asa filàna eran-tany. Dia afaka manampy anao hahatakatra ny fahafahana raha ny fitantanana ny loza. K P Lalàna Mafy dia boutique lalàna mafy tany Incheon, tany Korea manokana ao amin'ny orinasa, ny lalàna ara-barotra torohevitra sy pitsarana, ny orinasa dia mikasika ny heloka, tena toetrany ny fampandrosoana, sy ny fampiasam-bola vahiny. Ny traikefa sy ny fahalalana dia mitarika ny mpanjifa' ny fahombiazana sy marin-toerana ny fampandrosoana. Dia miasa ho an'ny maro. K L Vavahady LLP maneho mitarika ny global orinasa, ny fivoarana sy ny afovoany-tsena ny orinasa, ny renivohitra-tsena ireo mpandray anjara, sy ny mpandraharaha eo isaky ny orinasa lehibe vondrona toy izany koa ny vahoaka sehatry ny fikambanana, ny toeram-panabeazana, fikambanana mpanao asa soa sy ny olona.
Ny fomba fanao dia robustly iray.
DLA Piper nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra ny ara-dalàna mpanome tolotra ao izao tontolo izao tamin'ny taona ny alalan ny fiombonana tsy tafiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Raha lehibe amin'ny ambaratonga, ny fiombonana paikady dia tsotra - mba hamoronana fikambanana iraisam-pirenena ny fomba fanao ara-dalàna mahavita mikarakara ny manan-danja indrindra ara-dalàna ny zavatra ilain'ny.
SOORUN Azia Lalàna Birao nanome feno ara-dalàna ny asa ho an'ny varotra iraisam-pirenena tao Korea nanomboka tamin'ny.
Ny varotra mpisolovava hanampy ny orinasa vahiny ny fanapahan-kevitra ny varotra disadisa amin'ny koreana orinasa sy ny olona tsirairay. Isika dia mavitrika vondrona tena mahay sy azo itokisana. Tady Fotsy, mpitarika ny global lalàna mafy, manana tantara lavabe amin'ny fanompoana be pitsiny mpanjifa raha-dalam-pandrosoana miavaka ny mpisolovava. Izany lova, dia ny vokatry ny fiaraha-miasa na eo amin'ny vava sy ny mpanjifa ary eo ny mpisolovava - ary izany no mahatonga ny mafy amin'ny tena manokana toerana ho an'ny mpanjifa. LIO Mpiara-miasa dia mavitrika koreana lalàna mafy ny fanomezana feno ara-dalàna ny asa iraisam-pirenena sy ny mpanjifa eto an-toerana, amin'ny specializations amin'ny fahasalamana ara-dalàna, ara-pitsarana, sy ny orinasa varotra. Izany no fototry ny lanjan'ny fahatokiana, ny hatsaram-panahy, fiaraha-miasa sy ny fahamarinana izay efa nitombo ny fahefana nandritra ny dimy amby roapolo taona mamorona vaovao ara-kolontsaina. Izany fototra ny sanda dia mitovy amin'ny efatra sarety fa hifindra ny mpikambana ao amin'ny lalàna mafy ny Ranomasina Sisiny. Isika dia manohy mandray anjara amin'ny fanatanterahana. DR ATIDOHA no iray amin'ireo Korea folo lehibe indrindra amin'ny lalàna orinasa maherin'ny zato ny mpisolovava sy mitohy, mba hanitatra ny tambajotra ny sampana birao amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona misy azy amin'ny an-tampony ny lalàna orinasa any ivelany. Tamin'ny volana janoary, Atidoha ny Lalàna Iraisam-pirenena Group, orinasa lalàna mafy izay naorina tamin'ny taona natambatra. Bae, Kim Lee dia iray amin'ireo ny lehibe indrindra, ary lava indrindra nanorina ny fomba fanao iraisam-pirenena any Korea. Izany dia ekena ho toy ny iray amin'ireo ambony fanompoana manontolo lalàna orinasa sy ny mpisava lalana ao amin'ny lalàna hentitra ny fitantanana ny tany Korea. Ela no heverina ho ny firenena azo iadian-kevitra aloha mpitarika pitsarana sy ny mpanelanelana, ny mafy manana. Naorina tamin'ny, Shin Kim ny fahitana foana ny tolotra azo ampiharina sy ny famoronana vahaolana raha ny fiarovana ny soatoavina fototry ny fahamarinan-toetra sy tsara indrindra.
Ara-dalàna ny Fikambanana Tompon'ny Fandaharana - Fanontaniana fametraky ny - Birao ny Equalization
Antso mandritra ny ora fiasana, na mamela hafatra raha ny mpiasa dia tsy misy Tsy misy Na ny famindrana dia mety ho hita fa ny fiovana eo amin'ny fahafaha-manana na ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso, dia afaka ny ho mendrika ny iray amin'ireo exclusions avy reassessment ho ara-dalàna ny fikambanana famindranaNy lalàna no manome ho an'ny maro exclusions manokana vaovao exclusions dia azo amin'ny alalan'ny ny LEOP vaovao pejy ao amin'ny fizarana mikasika ny Exclusions avy Reassessment amin'ny ara-Dalàna ny Fikambanana Tompon'ny Fandaharana pejy web. Endrika BOE B, Fanambarana ny Fiovana eo amin'ny fanaraha-Maso sy ny Tompony ara-Dalàna ny Fikambanana, dia ampiasaina ny BOE mba hahazoana vaovao mba hamantarana raha toa ny famindrana ny tombontsoa ao amin'ny ara-dalàna ny fikambanana no niteraka a fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny tompony fa vokatry ny reassessment ny California real fananan'ny ny fikambanana, na ny fanilikilihana avy amin'ny manova amin'ny fananan-mihatra. Tsy fahombiazana ny rakitra na ny toe-javatra voalaza tetsy ambony dia hiafara amin'ny fampiharana ny sazy nanaraka ny vola Miditra sy ny Hetra Fehezan-dalàna ny fizarana (b). Ny mahazo ny olona na ara-pitsarana ny fikambanana dia takiana mba hametraka endrika BOE B ao anatin'ny andro ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny ara-dalàna ny fikambanana fa efa nandalo fiovana amin'ny tompony tsy maintsy rakitra. Na izany aza, misy ny olona ara-dalàna na fikambanana izay mandray ny teny BOE B dia tsy maintsy tanteraka sy rakitra ny BOE B ny BOE. Fanamarihana: Raha toa ny mpanoratra mangataka ny rakitra dia natao ny BOE, endrika BOE B dia tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny andro, na inona na inona ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny tompony ara-dalàna ny fikambanana efa nitranga. (Jereo ny vola Miditra sy ny Hetra Fehezan-dalàna ny fizarana iray sy.) Ny BOE nahazo vaovao milaza fa ny ara-dalàna ny fikambanana dia mety efa nandalo fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny tompony. Mety efa mifototra amin'ny vaovao nitatitra ny Franchise ny Hetra Birao fidiram-bola ny hetra dia hiverina ho an'ny fikambanana.
Raha toa ianao namaly hoe: 'eny' mba misy ny iray amin'ireo telo hetra hiverina fanontaniana, ny BOE mandefa endrika BOE B.
Amin'ny ankapobeny, ny daty fahafatesana no heverina ho ny daty ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny tompony (Jereo ny Fananana Hetra Fitsipika.). Noho izany, ny ara-pitsarana ny fikambanana dia tsy maintsy rakitra endrika BOE B ao anatin'ny andro ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na manova amin'ny tompony. Amin'ny toe-javatra izay dia tsy ampy ny fampahalalam-baovao mba hamaritana raha toa ka ny fikambanana no efa nandalo fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny fiovana eo amin'ny fananany, toy ny daty fahafatesana, (ohatra, final fizarana ny ara-dalàna ny fikambanana ny tombontsoa tsy mbola tapa-kevitra) ny famenoana ny endrika BOE B dia tsy maintsy atao ao anatin'ny andro ny daty ny fahafatesana misy fanazavana be dia be toy ny antoko misy azy ireo. Nasiam-panovàna endrika BOE B dia tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny andro aorian'ny tatitra ny fikambanana na ny olona mahazo vaovao manamafy ny farany fizarana ny ara-dalàna ny fikambanana ny tombontsoa vokatry ny tany ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na manova amin'ny tompony ny fikambanana mba tsy ny fampiharana ny sazy. Na ny ara-dalàna ny fikambanana dia mety ho hita any ivelan'ny California na ho levona, ny lalàna dia mitaky ny olona rehetra, na ara-pitsarana ny fikambanana ho tanteraka sy rakitra endrika BOE B eo amin ny fangatahana ny BOE. Raha nisy ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny fiovana eo amin'ny fananany, ny nahazo ny fikambanana ny fananan-tany any California mety ho iharan'ny reassessment, na inona na inona raha ny ara-dalàna ny fikambanana mitanjozotra ny endrika hita ao California na tsia. Ao ny raharaha ny fandravana ara-dalàna ny fikambanana ny fikambanana dia mety levona rehefa avy ny fotoana amin'ny fanontaniana ny endrika. Na ny nahazo ny ara-dalàna ny fikambanana na ny subsidiaries tsy manana na manofa ny fananan-tany any California, ianao tsy maintsy mbola rakitra endrika BOE B eo amin ny fangatahana avy amin'ny BOE. Ara-dalàna ny fikambanana endrika BOE B dia tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny andro ny fiovana eo amin'ny fanaraha-maso na ny fiovana eo amin'ny fahafaha-manana na inona na inona raha tsy fanilikilihana avy reassessment dia azo ampiharina.
Raha toa ianao ka amin'ny fandraisana ny hafa, ny fangatahana hametraka endrika BOE B ho an'ny fikambanana iray efa nametraka fitarainana fa misy ny antony maro mahatonga ny mety efa nitranga.
Ohatra, dia mety ho samy hafa ny fe-potoana fanontaniana, roa ary telo ny pejy voalohany ny endrika mamaritra ny vanim-potoana izay fanazavana dia nangataka. Na izany aza, na inona na inona ny antony, dia tsy maintsy ho tanteraka sy hiverina ny nangataka fanazavana. Raha mino izany dia mitovy fangatahana, mety ahitana dika mitovy ny talohan'ny nametrahana miaraka amin'ny taratasy iray manazava ny toe-draharaha.
Ahoana no Fandroahana Asa: Fitsipika ho an'ny Tompon-tany sy ny Fananany ny Mpitantana
Ny tompony dia tsy afaka manomboka ny fandroahana ny fitoriana raha tsy misy voalohany ara-dalàna fampijanonana ny tenancyIzany dia midika ny fanomezana ny mpanofa mpanoratra mariho, araka ny voalaza ao amin'ny fanjakana famaranana lalàna.
Raha toa ny mpanofa dia tsy mifindra (na fanavaozana ohatra, amin'ny alalan'ny fandoavana ny hofan-trano, na fitadiavana vaovao an-trano noho ny alika), avy eo dia afaka mametraka ny fitoriana tamin'ny fandroahana.
(Ara-teknika, izany dia antsoina hoe ny tsy ara-dalàna detainer, na UD, fitoriana.) Ny fanjakana lalàna voalaza amin'ny antsipiriany ny fepetra takiana mba hamaranana ny tenancy. Isan-karazany ny famaranana manamarika dia tsy maintsy ho samy hafa karazana toe-javatra, ary ny firenena samy manana ny fomba toy ny ahoana ny famaranana manamarika sy ny fandroahana ny antontan-taratasy dia tsy maintsy ho voasoratra sy ny nanolotra ('nanompo'). Na dia ny voambolana miovaova somary avy amin'ny fanjakana ny fanjakana, misy raha tsorina dia telo karazana ny famaranana manamarika fa tenancies fa tompontany hamarana noho ny fihetsika tsy mety nataon'ny mpanofa: na izany Aza, ao amin'ny firenena sasany, ny tompon-tany dia tsy ilaina ny manome ny mpanofa fotoana izay mandoa ny vola overdue hofan-trano na manamboatra ny lease fanitsakitsahana.
Ao ireo milaza, tompontany dia mety ampiasaina tsy misy fepetra Hiala Manamarika fa fandikan-dalàna izay mitaky Karama na Hiala Manamarika na Hanasitrana na Hiala amin'ny Filazana hafa, mihoatra mpanofa-namana states.
Ao ireo milaza, tompontany mety hanitatra ny faharoa, mety ho, raha tiany, fa tsy misy lalàna dia mitaky azy ireo hanao izany.
Na dia taorian'ny fandraisana ny filazana, misy ny mpanofa dia tsy handao na manamboatra ny lease, na fanofana fanitsakitsahana ny fifanarahana. Raha toa ka mbola te ho mpanofa mba hiala, tsy maintsy manomboka ny tsy ara-dalàna detainer fitoriana. Midika izany araka ny tokony ho fanompoana ny mpanofa amin'ny fiantsoana sy ny fitarainana noho ny fandroahana. Tompontany mety matetika mampiasa ny Andro na Andro Filazana ny Pelatanany ny faran'ny volana-ny-bolana tenancy rehefa ny mpanofa dia tsy nanao na inona na inona ratsy. Maro ny hofan-trano fanaraha-maso ny tanàn-dehibe, na izany aza, tsy hamela izany dia mitaky ny tompony mba hanaporofoana ny ara-dalàna ekena ho antony nanesorana azy ('fotsiny anton') ny mpanofa. Raha ny mpanofa dia raikitra ny fe-potoam-lease, tompontany matetika tsy afaka hamarana ny lease tsy hiteraka fotsiny. Raha toa ny mpanofa dia manapa-kevitra ny tendrombohitra ny fiarovana, izany dia mety manampy ny herinandro na volana ny fandroahana dingana. Ny mpanofa dia afaka hanondro ny fahadisoana eo amin'ny filazana na ny fandroahana fitarainana, na ho mendrika ny fanompoana (fanaterana) ny koa, ao ny fiezahana ny fanemorana na handroaka ny raharaha. Ny lalana izay efa nitarika raharaham-barotra amin'ny mpanofa mety hisy fiantraikany ihany koa ny vokany: Raha ny fanofana vondrona dia uninhabitable na ny mpanofa dia mihevitra ianao retaliating ho an'ny zavatra toy ny fanamboarana ny fangatahana, izany dia mety ho fialan-tsiny na hanodina ny saina hiala amin'ny mpanofa ny fanaovan-dratsy, sy mampihena ny mety ny fandresena. Raha mandresy ny tsy ara-dalàna detainer fitoriana, dia hahazo ny fitsarana noho ny fizakana ny fananany sy - na tsy handraisam-bola ho an'ny hofan-trano. Fa ianao dia tsy afa-mifindra ny mpanofa sy ny mpanofa ny fananany avy teo amin'ny sisin-dalana, miezaka ny hanala ny mpanofa ny tenanao dia mety hiteraka fahoriana be. (Ho fanampim-baovao, jereo ny tsy Manidy na Mandry Avy amin'ny Mpanofa ny Tsy ara-Dalàna.) Vitsy ny firenena mamela ny tompontrano malalaka izay tiany ny fananana ny mpanofa ao ambadiky ny ravinkazo rehefa nifindra avy. Na dia ao ireo milaza, izany no ara-dalàna raha tsy izany dia tena mazava fa ny mpanofa dia namela ny fotoana maharitra, ary hampiakatra ny toerana nandritra ny tompony.
Ao amin'ny firenena maro, tompontany tsy maintsy manaraka fitehirizana sy ny fampahafantarana ny fomba fiasa.
Matetika, dia tsy maintsy manome ny didim-pitsarana eo an-toerana ny manamboninahitra fampiharana ny lalàna (mpitandro filaminana na nitaona), miaraka amin'ny sarany izany dia nandidy ny mpanofa toy ny ampahany ny vola lany mba hitondra akanjo. Ny mpitandro filaminana na nitaona manome ny mpanofa ny filazana fa ilay manamboninahitra dia ho indray ao anatin'ny isan'ny andro ara-batana hanala ny mpanofa raha toa ny mpanofa dia tsy lasa avy eo. Misy antony, na izany aza, ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny firenena mikiry hentitra fanajana. Voalohany indrindra, ny fandroahana raharaha, somary miteny, ny fifadian-kanina ara-dalàna ny fomba. (Ny fomba maro hafa sivily no toe-javatra teo, ary atao amin'ny taorian'ny herinandro vitsivitsy.) Ny vola mba handoavana izany streamlined fitsaboana dia azo hozongozonina ny fankatoavana ny fitsipika.
Faharoa, inona amin'ny tsato-kazo eto amin'ny mpanofa ny trano dia azo antoka fa manan-danja bebe kokoa noho ny an-trano raharaha momba ny vola na ny raharaham-barotra.
Noho izany, ny mpanao lalàna no efa fanampiny tsara ny mahita fa ny mpanofa hahazo sahaza filazana sy ny fahafahana mamaly. Raha tsy mahafantatra tsara ny lalàna ny zo sy ny andraikiny eo anatrehan'ny hanaisotra ny mpanofa, ary raha tsy teboka isan 'i' ary ny hazo fijaliana rehetra 't, dia mety hiafara amin'ny fahaverezan'ny side. Ho fanampiana ny fanomanana sy ny fanompoana ny famaranana manamarika sy ny fandroahana ny fiantsoana sy ny fitarainana ho California fananana, jereo Ny California Tompony ny Lalàna Boky: ny Fandroahana, avy Nils Rosenquest ary Davida Volontany (Nolo). Ho an'ny topy maso terminations sy ny fandroahana ao amin'ny firenena hafa, anisan'izany ny manan-danja amin'ny fanjakana ny lalàna momba ny famaranana ho an'ny nonpayment ny hofan-trano ary ho lease ny fandikan-dalàna, jereo ny Rehetra ny Tompony ara-Dalàna ny Mpitari-dalana, amin'ny alalan'ny Janet Portman sy Marcia Stewart.
Ny tanàna fitsarana ao Korea Atsimo nitondra izany dia tsy ara-dalàna hamono alika ny hena. Izany no hanokatra ny lalana amin'ny firenena ny fandraràna
K-pop kintana Jung Joon-tanoraSeungri sy Yong Jun-hyung rehetra nanambara ny retirements avy mampiseho ny raharaham-barotra noho ny tantara ratsy vao haingana Seungri avy BigBang dia tafiditra tao amin'ny adihevitra ny fanolanana ho zava-mahadomelina GHB ampiasaina amin'ny boîte de nuit mifandray amin'ny ny mpihira Sary: Bloomberg Ny mpihira avy zazalahy tarika Hanasongadinana niaiky ny mijery ny lahatsary ny mpihira Jung Joon-tanora manao firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy raisina raha tsy misy ny fanekena An 'tanteraka. dia hamarinina sy irreversible denuclearisation' fa ny ANTSIKA teo aloha. dia nitaky no mitady inoana. ny manam-pahaizana milaza.
Korea Atsimo Visa Fampiharana Endrika Korea Atsimo Fepetra Fampiharana Ny Torolalana
Tokana Teny visa atao na ho lavitra na fotoana fohy
Izany dia ho lasa tena ilaina noho ny maha zava-dehibe io foto-kevitra io ihany koa ho toy ny vokatry ny tena fanontaniana maro ny olona no nanontany ahy sy ny mailaka efa mandray isan'andro momba ny Korea Atsimo tamin'ny Alalan'ny fampiharana endrikaRaha izaho dia haingana ny manambara aminareo fa misy be dia be ny fisolokiana sy ny vaovao diso momba manokana ity firenena ity ny Visa Lottery, aho, dia haingana dia haingana ny mandrisika anao hamaky eo mba hahazoana ny feno tsipiriany momba ny inona no mitady. visa teny fampiharana noho ny indoneziana, koreana visa fampiharana endrika sample, antontan-taratasy ilaina ho an'ny koreana visa, ny fomba azo antoka atsimo Ny Korea Atsimo visa mety indraindray manaporofo fa sarotra ny mahazo fa, izany fanazavana amin'ny antsipiriany, dia tsy afaka mahazo izany ratsy.
Korea atsimo dia ny fanjakana masi-mandidy ao Azia Atsinanana.
Ny renivohitra dia Seoul, izay manana ny faha- toe-karena lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny Koreana Tatsimo miteny ny fiteny koreana, fa ny anglisy no be koa nolazain ny maro amin'ny mpifindra monina. Toy ny fitaovana avo lenta firenena, Korea Atsimo dia maro ny raharaham-barotra ny mpitsidika. Korea atsimo visa mety ho tokan-tena-teny, double-teny na maro teny visa. Ny tokan-teny, ary avo roa heny teny visa dia manan-kery ho an'ny andro avy ny andro famoahana, sy ny maro teny visa dia manan-kery mandritra ny herintaona. Asides izany, misy ny visa-ny zana-karazana raha izany na ny mpianatra visa na ny raharaham-barotra visa izay matetika farany andro. Misy isan-karazany ny zavatra takiana ho an'ny isan-karazany ny koreana Tatsimo visa. Na izany aza, misy fepetra takiana fa mihatra saika ny rehetra ny karazana fahazoan-dàlana.
Miarahaba an'izao tontolo izao aho ThankGod AKA Owoblow
Isaky visa mpangataka dia tsy maintsy manana manan-kery Nizeriana pasipaoro. Ny antontan-taratasy ilaina ho an'ny koreana Tatsimo visa fampiharana dia ahitana: Io"visa"ho an'ny olona izay mikasa ny hiditra - hitsidika an'i Korea Atsimo indray mandeha. Io fahazoan-dalana dia manan-kery ho an'ny andro manomboka amin'ny daty ny olana. Maharitra ny tokan-teny ny visa dia ho mihoatra noho ny andro kosa-teny fohy iray teny"visa"ho an'ny tsy mihoatra ny andro. Io"visa"ho an'ny olona izay mikasa ny hitsidika an'i Korea Atsimo in-droa ao anatin'ny fe-potoana mampanan-kery. Roa visa fidirana mamela ny mpihazona ny mijanona ho ny ambony indrindra ny telo-polo andro ao anatin'ny enim-bolana. Izany visa no manan-kery nandritra ny volana Maro ny Teny"Visa"ho an'ny olona izay mikasa ny ho any amin'ny sy ny avy ao Korea Atsimo mihoatra ny in-droa. Ireo fahazoan-dàlana dia manan-kery mandritra ny herintaona. Koreana tatsimo visa fampiharana ny endrika azo alaina avy amin'ny masoivoho ny tranonkala sy nameno ny tanana. Ny e-visa endrika ihany koa dia afaka ny ho feno sy nanaiky an-tserasera. Afaka mandoa ny visa saran'ny tamin'ny visa fampiharana foibe amin'ny vola, na mampiasa a debit card. Zava-dehibe ny manamarika fa ny"visa"ny fanodinana saram dia tsy refundable. Manaraka ny fankatoavana ny fampiharana, dia afaka hanangona ny pasipaoro tamin'ny visa fampiharana centre, na amin'ny alalan'ny delivery amin'ny alalan'ny iraka ny asa fanompoana. Raha toa ny mpangataka mikasa ny hampiasa courier service, VAC tokony ho nampahafantarina dalàna. Aho ny antony manosika mpandaha-teny, ny SEO expert, Mpitoraka bilaogy, lahatsoratra mpanoratra, ny Mpitantana, ny mpandraharaha sy ny Injeniera ao ny manao. Mizara ny Fanabeazana vaovao ny olona ho azy ireo mba hamokatra ireo voafidy an-tsaha. Mahita anao ao an-tampon'ny.
Fahazoan-dalana hitondra fiara ao Korea Atsimo
Fahazoan-dalana hitondra fiara ao amin'ny Repoblikan'i Korea mety ho tratra amin'ny enina ambin'ny folo taona ho an'ny fiara sy moto Izany dia tanterahina noho ny koreana Tatsimo lalàna tamin'ny, izay nanome Miaramila cadets ny fitakiana ny fiara misy maotera-fiara Voasokajy ao amin'ny misaraka sokajy ity izay tsy manana fahazoan-dalana, fa ny vatana dia mety ho niasa mifanaraka amin'ny fanjakana sy ny fiara sy ny fahaiza-manao no mametra ny toe-piainana ambany, izay ny fiara dia afaka ny ho mendrikaAmin'ny volana jolay, mifototra amin'ny fahazoan-dalana mamily nanomboka, avy efatra amby roa-polo tamin'ny volana jolay voasoratra ao amin'ny Romana abidy nanomboka.
Amin'ity tranga ity, ny endri-tsoratra manana fahazoan-dalana mamily rafitra dia toy izao manaraka izao: (Lalana Fifamoivoizana ny Fampiharana ny Fitsipika asterisk) Ny birthdate sy ny taona dia havoaka ao amin'ny andalana voalohany ny isa, voahodidina ny volana - ny daty - taona endrika.
COST Action FP
Ny vola LANY amin'ny Asa FP"Mitondra asa vaovao ny hazo amin'ny alalan'ny ambonin'ny fanovana"tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny asa tamin'ny fanombohana ny fivoriana tamin'ny faha- aprily any BruxellesRehefa afaka efa-taona ny Asa sy ny zava-bita lehibe noho ny fiaraha-miasa akaiky ny mpandray anjara hirotsaka an-tsehatra amin'ny fitantanana ny komity COST Action FP dia nanapa-kevitra ny hamita ny fanomanana ny Hetsika miaraka amin'ny fanoloran-tena valan-dresaka momba Ny tena tanjon'ity Hetsika ity dia ny mba hanomezana ny ara-tsiansa, ara-rafitra sy ny fahalalana ho an'ny kokoa ambonin'ny fanovana ny hazo sy ny hazo vokatra mankany ambony functionalization sy manoloana ny fahatanterahan ambony ara-teknika, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana ny fitsipika. Toy izany fanatsarana no zava-dehibe ho an'ny lehibe sy ny maro hafa zava-baovao ny fampiasana ny hazo sy ny hazo mifototra amin'ny ny vokatra koa ny sehatra misimisy ny momba ny toetr'andro fanovana, amin'ny alalan'ny fampidinana ny ny fampiasana ny non-hazo fitaovana. Tena nahomby teo aloha ny mpianatra ao amin'ny Oniversite ao Ljubljana, Biotechnical Mpampianatra, Sampan-draharaha ny Hazo ny Siansa, ny Teknolojia, Slovenia, Ny Maotina fivoriambe ny fampielezana siantifika vaovao ao anatin'ny fiaraha-monina iraisam-pirenena amin'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fanovana, ny fahambanian-tsaina ary ny mpampihavana dingana ao polymers. Profesora Phil Evans, Oniversiten'i Columbia Britanika (Kanada) izy, nanome ny kabary fototra izay miresaka momba ny 'Hazo sary mpampihavana sy ny fiarovana: nivoaka tamin'izany ny lalana sy ny ho avy' sy ny filohan'i vita fanoloran-tena amin'ny fivoriana 'ny fahambanian-tsaina ary ny fiarovana ny hazo vokatra'. Maro ny mpikambana ny vola LANY FP sy FP nanolotra famelabelarana ity fivoriana: Andreja Kutnar, Oniversiten'i Primorska, Slovenia. Faran'ny fiainana toe-javatra, ary ny tontolo Iainana fiantraikan'ny hazo vokatra Marko Petric, Oniversiten'i Ljubljana, Slovenia. Hazo coatings nanao ny zary rano amin'ny hazo ary ny sasany hafa lignocellulosic fitaovana Irery Ross Gobakken, zavatra Ala sy ny Tontolo Institute, Norvezy. Fahasimban'ny hazo amin'ny hamolavola sy pentina manga holatra Irery Ross Gobakken, Lefitry ny Filohan'ny COST Action FP, koa nanome ny hiresaka mba hanolotra vola LANY sy ny vola Action FP. Nandritra ity fihaonambe ity izy dia nanome am-bava (nasaina) dia miresaka sy ny peta-drindrina ny famelabelarana. Izy koa nifandray ny sasany manan-danja ireo olona avy amin'ny Seoul anjerimanontolom-Pirenena sy niresaka tamin'izy ireo COST - Eoropeana, ny fiaraha-Miasa eo amin'ny sehatry ny ara-Tsiansa sy Teknika ny Fikarohana - dia iray amin'ireo indrindra nihazakazaka Eoropeana fitaovana manohana ny fiaraha-miasa eo anivon ny mpahay siansa sy ny mpikaroka manerana an'i Eoropa.
LAFO ihany koa ny voalohany sy ny karazana Eoropeana vetivety izay no nahitana ny tambajotra ho an'ny fandrindràna ny firenena ara-bola ny asa fikarohana.
Very olon-tiana iray, na ny havany no tena lehibe very, saingy ny fiainana tsy misy faranyMatetika, araka ny efa nodimandry, mbola misy ny fananana izay tsy isan ny fiainana. Inona no tokony ho nandray ny fizakana ny fananana ity, ary inona ny antontan-taratasy ilaina mba hiditra ao amin'ny lovany? Ao ny rosiana ny lalàna sy ny ao an-trano. Ny Fehezan-dalàna ao amin'ny Federasiona rosiana milaza fa ny fianakaviany na ny olona hafa, dia afaka mangataka ny lova izay efa nodimandry raha manana dia vita nandritra ny androm-piainany. Noho izany, ny fitsipi-hiditra ao amin'ny lova fanjakana izay azo atao mba hahazoana nandao ny fananany ary tena ho olon-kafa. Raha tsy nisy ny voasoratra, dia ny lova afaka milaza fa, voalohany, ny vady, ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Raha tsy misy, dia rahalahy, anabavy, renibe, ny zana-drahalahiny sy ny hafa tsy havana akaiky afaka milaza ny nandao ny fananany. Ilaina ihany koa ny mitadidy fa ny havany akaiky dia mety tsy miankina mampihatra ny fitsarana, sy ny fitakiana izy fa ho ekena ho toy ny manana ny zo handray fananana rehefa ny olona iray izay lasa any amin'ny manaraka izao tontolo izao. Ny fizarana ny fananana tavela taorian'ny maty dia hirotsaka amin'ny notary. Ny fidirana ho any amin'ny lovany, ny antontan-taratasy ilaina noho izany ny fomba, sy ny fitaka tao amin'ny fitondran-tena ihany io manam-pahaizana manokana. Hatramin'ny taona, ny ho avy mpandova manana zo hampihatra misy notary birao, na dia alohan'ny fotoana, notaries nizara territorially. Mba hanamorana ny dingana, misy elektronika banky angona izay rehetra angon-drakitra momba ny hoavy mpandova dia voatahiry. Ny notary dia voatery tsy maintsy mandalina ny raharaha, ary, toy ny fitsipika ny hiditra ao amin'ny lova mitaky, hampandre ny hafa ny havana akaiky izay ihany koa ny manan-jo samihafa ny hizara ny fananany. Inona taratasy ianao no mila manangona mba hanomboka ny fomba fidirana ao amin'ny lovany? Tsara homarihina fa io no tsy farany ny lisitry ny fiarovana. Raha ny dia natao, dia mila manao antoka fa ny tsipiriany rehetra dia mankatò, raha tsy izany ny taratasy dia hoe tsy manan-kery. Matetika rehefa maty ny olona, real estate mbola (matetika kokoa ny trano). Inona ny antontan-taratasy ilaina ho lovan ny trano Araka ny hita, dia tsy misy na inona na inona, sarotra ny hahazo trano amin'ny alalan'ny lalàna sy ny formalize ny fidirana ho any amin'ny lovany. Ny antontan-taratasy nandritra ny fisoratana anarana ho amin'ny lova tsy maintsy omena ny notary, izay ho fitondran-tena ny nametraka ny fanaraha-maso, ary raha toa ka tsy misy ny sakana, dia afaka enim-bolana ny mpandova azy dia mety ho efa nahazo ny zo manokana ny toerana velona. Fiara dia toy izany koa ny fananana toy ny trano Inona ny antontan-taratasy ilaina ho amin'ny lova sy ny fahazoana ny fiara izay nijanona araka ny efa nodimandry. Indro ny lisitra feno: tsara ny manamarika fa raha ny fiara no unsubscribed lehilahy iray dia, avy eo izany dia ilaina ny manome ny am-boalohany ity taratasy. Raha ny havana akaiky miditra ny tompony marina, dia izany no ilaina mba hanamarinana ihany ny zava-misy ny toy izany. Ny lisitry ny antontan-taratasy ho an'ny fidirana sy ny fisoratana anarana ny lova ny fitantanam-bola, izay ao amin'ny banky: Tena ilaina koa ny hanome ny notary amin'ny lisitra feno ny banky, izay efa nodimandry afaka hitandrina ny tahiry. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny voatanisa fonosana ny antontan-taratasy dia tsy farany. Ny manam-pahaizana manokana dia manana zo hitaky ny avy amin'ny mpandova iray dia sy ny taratasy hafa mba hanangona ny lisitra feno ny antontan-taratasy.
Ny farany fonosana ny fiarovana dia ho fantatra ihany rehefa hanao tafa sy dinika manokana amin'ny notary.
Noho izany, raha toa ka hita fa ny maty dia tsy havela tsy misy didim-pananana ho an'ny antoko fahatelo, ary ny nametraka fe-potoana, araka izay azonao atao ny milaza lova, havana akaiky dia manana zo hitaky ny fananany ny maty araka ny lalàna.
Inona ireo antontan-taratasy ilaina mba ho lova eo amin io toe-javatra io. Misy ihany koa ny toe-javatra rehefa taorian 'ny fahafatesan' ny olona iray, ny fianakaviana sy ny soatoavina sy fianakaviana hafa ny fananana mitoetra. Inona ny antontan-taratasy ilaina mba hiditra ao amin'ny lova amin'ity tranga ity. Raha ny marina, dia tsy misy marina list, fa ny notary mila misy antontan-taratasy na antontan-taratasy izay afaka manaporofo izany amin'ny havana akaiky dia afaka milaza izany fananana. Ny dingana ny fahazoana ny fananana taorian'ny maty tokoa manamora ny dia, izay natao nandritra ny fiainana ny olona iray. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny dia tsy maintsy voatery ho fanamarinana ara-panjakana, izany dia tokony ahitana ny pasipaoro angon-drakitra ny tompony ny fananany sy ny mpandova azy, ary ny tompony dia tsy maintsy salama saina. Voalohany, ny notary dia fangatahana avy amin'ny ho avy ny tompony ny fananany ny tany am-boalohany iray ihany dia. Bebe kokoa, dia tsy maintsy manamarina ny maha-tena izy, ary raha toa ka tsy misy ny filazana izany taratasy, dia ny manam-pahaizana manokana dia olana ho mpandova ny lisitra feno ny antontan-taratasy ilaina.
Raha ny sitrapoko dia nosarihana niakatra, ohatra, fa tsy amin'ny havana akaiky, dia tao amin'ity tranga ity ny olona iray mbola tsy maintsy manamarina ny zava-misy toy ny maty.
Raha misy olona tsy manana ra fifandraisana amin'ny maty, dia izy no tsy ilaina ny manome toy izany taratasy. Araka ny lalàna, ny ho avy handova ny maty ny fananana dia manan-jo handà ny lova, nefa izany ihany no azo atao amin'ny famindram-po ny havana ny ny olona, na izay manohana ny olona dia eo am-pelatanany. Io zo io dia tsy ampiharina amin ireo olona, izay tsy manana lova amin'ny fitsarana, na raha misy mpandova ny sitrapony. Koa, tsy afaka ny waive ny zo handova, raha ny maty dia nandrafitra maro ho an ny olona. Ara-dalàna ny mpandova tsy maintsy manokana, hanao fanambarana momba ny fandavan'ny ny fananana voatendry ho azy ao amin'ny famindram-po ny olona iray hafa.
Ao amin'ny taratasy, dia tsy maintsy milaza lahatahiry iray manokana ny olona.
Azonao atao ihany koa ny handao ny fananany raha toa ka maty tsy nanana trosa, ohatra, ao amin'ny fampindramam-bola. Avy eo ny vola lany amin'ny lovany dia handeha mba handoavana trosa.
Kajy ny onitra noho ny tsy ampiasaina hiala amin'ny taona amin ny fandroahana - Vehivavy Ny Fironana
Araka ny lalàna rosiana, isaky ny mpiasa dia manan-jo ny vola sisa Tokony ho fantatrao koa fa ny mpiasa izay efa niasa tao amin'ny orinasa ny volana s voatery mandoa onitra ho an'ny rehetra ny malaza fanao isan-taona niala tamin'ny raharaha ny mpiasa voaroakaMomba ny andro farany ny asa, ny mpiasa dia voatery mandoa ny karama, ny valisoa, ary koa ny onitra noho ny tsy ampiasaina fialan-tsasatra sy ny hafa hanaraka ny compensations. Ho an'ny hetra, onitra noho ny tsy ampiasaina fialan-tsasatra dia kaontiana ao amin'ity tranga ity, ary koa ny asa ny vola lany.
N. Korea ny fialàny amin'ny inter-koreana-tokotanin'ny biraom-pifandraisan'i amin'ny Gaeseong - Arirang Vaovao
Ny an'i Korea atsimo ny lefitry ny minisitry ny fampiraisan-tsaina, Chun Hae-sung, izay avo roa heny toy ny koreana Tatsimo talen'ny inter-koreana-tokotanin'ny biraom-pifandraisan'i nanome antsika ny fandaharam-tolakandro ityNy Avaratra nampahafantarina ny Atsimo fa ny fanalana avy amin'ny mpiara-tokotanin'ny biraom-pifandraisan'i sy ny tsy fikarakarana raha ny Koreana Tatsimo hijanona ao. 'Ny alalan' ny fifandraisana eo Atsimo sy korea Avaratra mifandray manamboninahitra tamin'ity maraina ity, ny koreana Tavaratra side nampahafantatra antsika fa ry zareo ny fanalana avy any amin'ny biraom-pifandraisana ao amin'ny toromarika avy any amin'ny an-tampony. Ny governemanta koreana Tatsimo mahita ny Avaratra ny fanapahan-kevitra toy ny mampalahelo, ary manantena isika fa ny Avaratra afaka miverina any amin'ny birao haingana araka izay azo atao sy ny resume ara-dalàna ny asa. Rehefa afaka manome filazana, ny koreana Tavaratra mpiandraikitra niala avy hatrany, saingy tsy manala na inona na inona fitaovana na zavatra hafa. Nanampy izy fa ny Seoul ny governemanta fa tsy mahita izany ho toy Korea Avaratra ny fandikana ny inter-koreana fivoriambe fifanarahana. ary tsy hitsambikina mba tsoa-kevitra, fa dia miandry ary maka fotoana mba mamakafaka ny toe-draharaha Fa ny any Atsimo sy korea Avaratra tale ao amin'ny biraom-pifandraisana tsy nisy fivoriana nanomboka ny fiandohan'ny volana Martsa, sy ny koreana Tavaratra lefitry ny tale tsy mbola hita tao amin'ny birao nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo, izay nanandratra ny ahiahy momba ny Avaratra ny attendence.
Trosa Famoriam-bola ny Mpianatra Loans-ny
Trosa famoriam-bola ny mpianatra bola eo amin'ny fiakaran'ny, araka ny isan'ny mpianatra bola eo amin'ny toerana misy anao tsy mitsaha-mitombo
Ny vaovao tsara dia hoe ny trosa fanangonana hetra amin'ny mpianatra bola dia fehezin'ny FDCPA, izay miaro ny mpanjifa manohitra ny herisetra sy ny tsy rariny ny famoriam-bola ny fomba fanao.
Ny vaovao ratsy dia ny fanangonana ny mpianatra bola dia miroborobo raharaham-barotra. Raha toa ka ianao ho nifandray tamin'ny trosa hetra momba ny mpianatra bola, ireto misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao. Mpianatra loans dia heverina ho toy ny mpanjifa trosa, izay midika fa trosa fanangonana hetra amin'ny mpianatra bola dia fehezin'ny FDCPA. Midika izany fa ny trosa hetra tsy hamitaka anareo, dia tsy afaka ny manadala anao, ary tsy afaka ny hanao ny tsy rariny, na mahery setra trosa fanangonana ny tetika. Ohatra, raha toa ny trosa hetra dia manangona amin'ny tsy miankina mpianatra findramam-bola, dia tsy nandrahona ny hitory ianao (raha tsy hoe izy ireo mikasa ny manao izany), dia tsy afaka ny hanangona ny mety vola, ary tsy afaka mandainga aminao momba ny ampiharina ny lalàna famerana ny findramam-bola. Ho an'ny federaly tohanan'ny mpianatra bola, ny governemanta, ny fifanarahana miaraka amin'ny maro ny orinasa tsy miankina mba hanangona defaulted fampindramam-bola. Raha toa ny trosa hetra misleads na misrepresents ny mpanjifa momba ireo safidy izay mety ho fandikana ny lalàna. Na raha toa ny trosa hetra ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ny mpampiasa momba ny findramam-bola, na ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ny fianakaviana(s), fa mety koa ho fanitsakitsahana ny lalàna. Ny dingana voalohany dia ny hamantarana ny zavatra karazana fampindramam-bola ny mpianatra manana: federaly na tsy miankina. Raha toa ianao ka antoka, dia misy fomba roa ny olo-malaza fa avy. Iray, ianao afaka mangataka ny servicer - mpiantoka Raha toa ianao ka nantsoin'ireo trosa hetra, dia tokony ho afaka hilaza aminao ihany koa. Roa, dia afaka mitraka ny fampindramam-bola ao amin'ny-Pirenena Mpianatra findramam-Bola ny banky Angona. Raha ny fampindramam-bola dia voatanisa ao amin'ny banky angona, dia federal. Tsy miankina fampindramam-bola dia tsy voatanisa ao amin'ny banky angona. Ny fomba fanangonana tsy miankina mpianatra fampindramam-bola amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny hafa karazana mpanjifa trosa (toy ny carte de crédit trosa, ara-pitsaboana trosa, sns.). Fa amin'ny ankapobeny dia midika hoe raha tsy misy ny fitsarana, ny tompon-trosa dia tsy afaka an-keriny hanangom-bola amin'ny alalan'ny banky na ny karama garnishment (fanamarihana: Minnesota no mamela garnishment indray ny fitoriana dia nanomboka fa mialoha ny fitsarana dia azo amin'ny tena voafetra ny toe-javatra). Izay tena fototra mitovy amin'ny fampindramam-bola federaly, izay ny Sampan-draharaha ny Fanabeazana dia manana sakany sy ny fiantraikany lavitra dia lavitra ny zon'olombelona hanangona ny trosa raha tsy misy ny fitoriana. Zava-dehibe ny mahatakatra ny maha samy hafa ny famoriam-bola antso - taratasy sy fitoriana - ny fitsarana. Ny ezaka hanangona ny trosa fotsiny fa manontany anao an-tsitrapo mandoa ny vola. Afa-tsy ho an'ny tena voafetra ny toe-javatra, raha tsy misy didim-pitsarana, dia tsy misy fomba mba noterena hanangona vola. Tsy toy ny fampindramam-bola tsy miankina, ny Sampan-draharaha ny Fanabeazana (DOE) afaka manomboka fanangonana amin'ny defaulted mpianatra findramam-bola raha tsy misy fitoriana sy - na ny fitsarana. Ankoatra izany, raha vao ny fampindramam-bola federaly any an-toerana misy anao, ny fanangonana ireo saram ny enina ambin'ny folo (na mety ambony) ny fifandanjana dia afaka hanampy ny mpianatra bola trosa. Fa be dia be ny vola Na dia soa aman-tsara indray ny mpianatra bola, indrindra ireo famoriam-bola saram-dia mijanona eo ny tantara. Misy ny mametra ny habetsaky ny vola izay mety ho sitrana amin'ny alalan'ny fomba ireo. Karama garnishment dia voafetra ho dimy ambin'ny folo ny misambotra ny fanary fidiram-bola. Hetra refund hisambotra dia tsy voafetra ho misy vola napetraka Fiarovana ara-tsosialy ihany no azo mahatsara tarehy ny ambony indrindra dolara, isan-taona, ary tsy hampihena ny isam-soa eto ambany dolara - bolana. Ny safidy fa rehefa mivoaka ny toerana misy anao ary na manakana ny famoriam-bola dingana izany dia miovaova arakaraka izay karazana findramam-bola (tsy miankina na federaly) sy ny toerana misy ny findramam-bola (tsotra, amin'ny famoriam-bola, taorian'ny fitsarana, sns.). Amin'ny ankapobeny, raha ianao no teo aloha ao amin'ny famoriam-bola dingana, dia tokony hanana safidy bebe kokoa. Raha toa ka mila manokana torohevitra araka ny lalàna noho ny toe-javatra, tokony hifandray ny fampanoavana avy hatrany. Raha manana fampindramam-bola federaly, azonao atao ny manamarin avy amin'ny governemanta vaovao eo amin'ny fahazoana avy ny toerana misy anao. Tsy misy marimaritra iraisana ny tranonkala ho an'ny tsy miankina ny mpianatra bola, ny findramam-bola satria ny tsirairay no samy hafa, ary fehezin'ny fepetra izany findramam-bola. Na izany aza, raha toa ianao ka manana olana amin'ny fifampiraharahana ny takatry ny hamaly, ny CFPB nanome santionany endrika taratasy izay azonao ampiasaina mba hifandray ny misambotra na ny asa fanompoana. Mpianatra loans dia sarotra ary matetika dia tafiditra vola be dia be. Raha jerena ny mety ho vokany ny defaulted mpianatra findramam-bola, miresaka ny mpisolovava hevitra tsara.
Na raha toa ianao fotsiny, mila mahatakatra ny safidy, misafidy ny iray safidy ny ny iray hafa mety hiteraka tahiry manan-danja nidina ny lalana.
Korea Dratsy ny Fampanoavana ny Grefy ny Asa. Fampiharana
Ny Fampiharana ny Mety Fampanoavana sy ny Grefy ny Asa Korea ("Grefy Act") dia niolomay nanohitra ny olana nitarika koreana fitsarana ny zava-tsarotra Ny Fampiharana dia voafaritra ao amin'ny Andininy faha-roa Andininy faha-iraika ambin'ny folo ny Kolikoly Lalàna Ny Lalàna mihatra amin'ny samy koreana sy ny teratany vahinyNy Lalàna mihatra teratany vahiny, hany, ho voarara ny asan'ny apôstôly ao anatin'ny Korea sy ireo Koreana ho an'ny voarara ny asan'ny apôstôly izao rehetra izao ny sakany.
Ara-dalàna ny asa Fanompoana ao Korea - te-ho visa ankehitriny aho hijanona korea